संकटापन्‍न ब्वाँसो- विविधा - कान्तिपुर समाचार
फाल्गुन १७, २०७६ कमल मादेन
राजन अमिन, हेमसागर बराल र अन्यको नेपालको स्तनधारी वन्यजन्तुको अवस्थाबारे लेख ‘जर्नल अफ थ्रेटेन्ड ट्याक्सा’ भोलुम–१० अंक ३ (सन् २०१८) संस्करणमा छापिएको छ । त्यस अनुसार नेपालमा पाइएका २ सय १२ स्तनधारी वन्यजन्तु प्रजातिमध्ये ४९ प्रजातिको अवस्था खतरामा छ ।
तिनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयुसीएन) को वर्गीकरण अनुसार लोपोन्मुख, संकटापन्न र अति संकटापन्न अवस्थामा क्रमशः १४, २६ र ९ प्रजाति छन् । आईयुसीएनको वर्गीकरणमा अति संकटापन्नपछि लोप हुने खुड्किलो आउँछ । यस अनुसार नेपालमा रहेका अति संकटापन्न ९ प्रजाति लोप हुने खतारमा छन् । ‘पिग्मी हग’ अर्थात् बामपुड्के बँदेल नेपालमा केही दशक अघिबाट लोप भयो ।
आईयुसीएनले सन् २०१६ मा प्रकाशित गरेको जानकारी अनुसार थाइलासिन (अर्थात तास्मानियन टाइगर) विश्वमबाट लोप भएको छ । उक्त जनावर अष्ट्रेलियाको दक्षिण तास्मानिया टापुको जंगलमा मात्र पाइन्थ्यो ।
‘कन्जरभेसन साइन्स एन्ड प्राक्टिस’ जर्नलमा नरेश कुसी, क्लाउडियो सिल्लेरो–जुबिरी र अन्यद्वारा लेखिएको उच्च हिमाली भेगमा भइरहेको संकटापन्न वन्यजन्तु तथा मानव द्वन्द्वबारे लेख डिसेम्बर २०१९ संस्करणमा छापिएको छ । ‘पर्सपेक्टिभ अफ ट्राडिसनल हिमालयन कम्युनिटिज अन फोस्टरिङ को–इक्जिस्टेन्स विथ हिमालयन वल्फ एन्ड स्नो लियोपार्ड’मा हिमालयन वल्फ र हिउँ चितुवाप्रति स्थानीयको बुझाइ अवगत गराइएको छ । अघिल्लो वन्यजन्तु अति संकटापन्न र दोस्रो संकटापन्न सूचीमा सूचीकृत छ । यी २ जनावरले कहिलेकाहीं घरपालुवा चौपायालाई आहारा बनाउँछन् । स्थानीयले २ मध्ये हिमालयन वल्फलाई चाहिँ भेटेसम्म मार्ने गर्दारहेछन् । हिमालयन वल्फ वन्यजन्तु अध्ययन, अनुसन्धान तथा संरक्षण क्षेत्रमा उपेक्षामा छ । यस लेखमा यसैबारे चर्चा गरिंदैछ ।
प्राणी विज्ञानमा २ ‘ल्याटिनाइज्ड’ शब्दले प्रजाति र यस्ता ३ शब्दले उप–प्रजाति जनाउँछ । कार्ल लिन्नियसले सन् १७५८ मा कुकुरजस्तो तर खैरो रंगको ‘ग्रे वल्फ’लाई क्यानिज लुपस नामकरण गरे । ‘ग्रे वल्फ’ सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक लेखहरूमा पृथ्वीको उत्तरी गोलार्द्धका कतिपय देशमा क्यानिज लुपस पाइने उल्लेख छ । तर नाम लेखिँदा प्रजाति नभई उप–प्रजाति लेखिएको हुन्छ । जस्तो— क्यानिज लुपस पालिप्स, क्यानिज लुपस चान्को । आईयुसीएनले २०१८ मा प्रकाशित गरेको जानकारी अनुसार उत्तर अमेरिका, युरोप र एसियामा क्यानिज लुपसका क्रमशः ५, २ र ३ वटा उप–प्रजाति पाइन्छन् ।
शान्तराज ज्ञवाली, हेमसागर बराल र अन्यद्वारा लिखित ‘द स्टेटस अफ नेपाल्स म्यामल्स ः द नेसनल रेड लिष्ट सिरिज’ (२०११) मा नेपालमा पाइने ‘ग्रे वल्फ’को वैज्ञानिक नाम ‘क्यानिज लुपस लुपस’ लेखिएको छ । पुस्तकमा नेपालमा यसको संख्या ३०–५० वटामात्र छन् भन्ने अनुमान छ । क्यानिज लुपस लुपस ग्रे वल्फ १९८५ मा प्रस्तावित गरेको एक उप–प्रजाति थियो । हिजोआज यसलाई ग्रे वल्फको एक उप–प्रजातिको पर्यायवाची मानिन्छ । मधु क्षत्री, यादवेन्द्रदेव भि. झाला र अन्यद्वारा लिखित ‘एन्सियन्ट हिमालयन वल्फ’मा नेपालमा पाइने ब्वाँसोको वैज्ञानिक नाम क्यानिज लुपस चान्को लेखिएको छ । लेख जुकिज जर्नलको अंक ५ सय ८२ संस्करणमा सन् २०१६ मा छापिएको हो । क्यानिज लुपस चान्कोलाई मंगोलियन वल्फ, चाइनिज वल्फ, तिब्बतीयन वल्फ र कोरियन वल्फ पनि भनिन्छ । यो कोरिया, उत्तर र मध्य चीन, मंगोलिया, भारत (हिमाचलदेखि कस्मीरसम्म) र रसियाको केही भूभागमा पनि पाइन्छ ।
जेराल्डिन वेरहान नेपालको उच्च हिमालय तथा मध्य एसियामा पाइने ग्रे वल्फ अध्ययन, अनुसन्धान गर्दैछिन् । उनको नेपालको उच्च हिमालय क्षेत्रमा पाइने ग्रे वल्फबारे ३/४ वटा अनुसन्धानात्मक लेख प्रकाशित भइसकेको छ । उनले पोल्यान्डमा २८–३० मे, २०१९ सम्पन्न क्यानिड स्पेसियलिष्ट ग्रुपको कार्यशालामा नेपालको उच्च हिमालय क्षेत्रमा पाइने ब्वाँसोको अंग्रेजी तथा वैज्ञानिक नाम क्रमशः हिमालयन वल्फ र क्यानिज लुपस हिमालयेन्सिस प्रस्ताव गरेकी थिइन् । वेरहाननको बुझाइमा हिमालयन वल्फको वंशाणु इन्डियन ग्रे वल्फ र तिब्बतीयन ग्रे वल्फको भन्दा केही फरक छ । भारतको समथर भूभाग लगायत दक्षिण–पश्चिम एसियामा पाइने ब्वाँसोको अंग्रेजी र वैज्ञानिक नाम इन्डियन ग्रे वल्फ र क्यानिज लुपस पालिप्स हो ।
माथि उल्लिखित क्यानिड स्पेसियलिष्ट ग्रुपको कार्यशालामा बेलायत, अष्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, तान्जानिया, फिनल्यान्ड, स्लोभेनिया लगायत आर्ययुसिनका विज्ञहरू उपस्थित थिए । उक्त कार्यशालाले नेपालको ब्वाँसोको अंग्रेजी नाम हिमालयन वल्फ मान्दा फरक नपर्ने जनाउ दियो । तर वैज्ञानिक नाममा भने अहिलेलाई क्यानिज लुपस हिमालयेन्सिसको साटो क्यानिज लुपस चान्को नै मान्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । बेलायतका प्राणीविज्ञ जेई ग्रेले सन् १८६३ मा चीनबाट ल्याइएको जंगली कुकुरको नमुना जुन युरोपियन ग्रे वल्फजस्तै देखिने तर अलि फरक भएकाले त्यसलाई क्यानिज लुपस चान्को नामकरण गरेका थिए । चीनमा त्यसलाई चान्को र तिब्बतमा चान्गु भनिन्छ । क्यानिड स्पेसियलिष्ट ग्रुपले हिमालयन वल्फ एक छुट्टै उप–प्रजाति क्यानिज लुपस हिमालयेन्सिस ठहर गर्न थप केही जानकारी समेटिनुपर्ने धारणा अघि सारेको थियो । यसको अर्थ भोलिका दिनमा आणुवंशिक अध्ययन, अनुसन्धानबाट थप फरक तथ्य प्राप्त भए, नेपालको उच्च हिमाली भेगमा पाइने ग्रे वल्फ विश्वकै निम्ति एक नयाँ उप–प्रजाति सावित हुनसक्छ । त्यसपछि यसलाई वेरहानले प्रस्ताव गरे बमोजिम क्यानिज लुपस हिमालयेन्सिस भन्न मिल्छ । तर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसूची–१ मा क्यानिज लुपसलाई संरक्षित वन्यजन्तु मानिएको छ । ब्राइन हड्सनले नेपालमा पाइएको ग्रे वल्फलाई सन् १८४७ मा क्यानिज ल्यानिगर उल्लेख गरेका थिए ।
पृथ्वी उत्पत्तिदेखि अहिलेसम्मको अवधिलाई जम्मा ५ कल्पमा विभाजन गरिएको छ । त्यसमध्ये पछिल्लो कल्प नवजैविक कल्प हो । यसको पनि पछिल्लो करिब १०/११ हजार वर्षको अवधिलाई होलोसिन भनिन्छ । होलोसिनको सुरुको अवस्थामा पृथ्वीको पछिल्लो हिमयुग समाप्त भयो । त्यसपछि भू–सतहको तापमान बढ्न थाल्यो । मानिस घुमन्ते जीवन त्यागी खेतीपाती र पशुपालनतर्फ उन्मुख हुनथाले । त्यसबेला मानिसले थाहा पाए कि ग्रे वल्फ मानव चहल–पहल हुने ठाउँ नजिक बस्न रुचाउँछ । ती जनावरले मानिसले छाडेका खानेकुरा तथा मानव बिस्टा खाने गर्थ्यो । यसले साना तथा मझौला जनावर मारेर खान्छ ।
मानिसले ग्रे वल्फ चलाख भएका कारण त्यसको चतुराइ उपयोग गर्नसके फलदायी हुने ठानी त्यसलाई पाल्न सुरु गरे । ऊ बेला ग्रे वल्फलाई मूलतः सिकार गर्न सहयोगी र घरको पहरेदारी गर्न पाल्न सुरु गरिएको थियो । त्यसयता घरमा पालिएका ग्रे वल्फका सन्तानको बासस्थान, रहन–सहन आदि जंगलमै बसेको ग्रे वल्फको भन्दा पृथक भयो । कालान्तरमा जंगलको ग्रे वल्फ र घरमा पालिएकाहरू फरक स्वरूपमा प्रकट हुँदै गए । वन्यजन्तु वैज्ञानिकहरूले घरमा पालिएका कुकुरलाई तिनै जंगली ग्रे वल्फका एक उप–प्रजाति मानेर यसको वैज्ञानिक नाम क्यानिज लुपस फेमिलिअरिज दिएका छन् । ग्रेगर लार्सन र डोरिअन क्यु. फुलर लिखित ‘द इभोलुसन अफ एनिमल डोमेस्टिकेसन’ (२०१४) अनुसार मानिसले सबैभन्दा पहिले ग्रे वल्फलाई करिब ११ हजार वर्ष पहिलेबाट चीन तथा पश्चिम युरोपमा पाल्न सुरु गरेका थिए । त्यसपछि बिरालो, सुंगुर, परेवा, कुखुरा पाल्न थालिएको हो ।
नरेश कुसी, क्लाउडियो सिल्लेरो–जुबिरी र अन्यद्वारा लिखित ‘पर्सपेक्टिभ अफ ट्राडिसनल हिमालयन कम्युनिटिज अन फोस्टरिङ को–इक्जिस्टेन्स विथ हिमालयन वल्फ एन्ड स्नो लियोपार्ड’ अनुसार हुम्ला, डोल्पा र ताप्लेजुङमा हिमालयन वल्फ र हिउँ चितुवाबाट याक, जंगली गधा, घोडा, बाख्रा, भेडा, गाई, गोरु मारिँंदो रहेछ । हिउँ चितुवाले हिमालयन वल्फबाट भन्दा बढी घरपालुवा चौपाया आहारा बनाउँदो रहेछ । उल्लिखित लेख पढ्दै जाँदा हुम्ली र डोल्पालीले हिउँ चितुवा मार्नुहुन्न भन्ने जानकारी राखेको तर हिमालयन वल्फ मार्दा खासै फरक नपर्ने बुझाइ रहेको छ । उनीहरूले ४/५ तरिकाबाट हिमालयन वल्फ मार्दा रहेछन् । आक्कल–झुक्कल हिउँ चितुवा पनि मार्दा रहेछन् ।
अहिले हिउँ चितुवा संरक्षणप्रति सचेतना फैलाउने काममा राज्य र गैरसरकारी संस्था दुवैबाट उल्लेख्य काम भइरहेको छ । तर हिमालयन वल्फप्रति बेवास्ता छ । हिमालयन वल्फबारे अध्ययन, अनुसन्धान नै कम भएको छ । नेपालमा हिमालयन वल्फबारे २०१६ बाट मात्र अध्ययन, अनुसन्धानात्मक लेखहरू प्रकाशन हुनथालेको छ । वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर टासी घले अहिलेसम्म हिमालयन वल्फको ४/५ वटाको १ झुन्ड मुस्ताङमा १ पटकमात्र देखेको बताउँछन् । मधु क्षत्री र अन्यद्वारा लिखित ‘एन्सियन्ट हिमालय वल्फ’ (२०१६) लेखिए अनुसार उपल्लो मुस्ताङमा करिब ५ हजार मिटर उचाइमा हिमालयन वल्फ मे २०१४ मा केही पटक देखिएको थियो ।
पंक्तिकार २००९ अगष्टमा रुकुम र डोल्पा सीमा जोडिएको सुनदह नजिक (समुद्री सतहबाट ४५ सय मिटर भू–सतह उचाइमा) २ रात भेडीगोठमा बास बसेको थियो । भेडी गोठमा डरलाग्दा कुकुर पालिएका थिए । गोठाला भन्थे, ‘यत्रो कुकुर नपाले ब्वाँसोले भेडा सखाप पार्छ ।’ ब्वाँसो वर्षमा एकाध पटक आहार खोज्दै त्यता पुग्दोरहेछ । एकाध भेडी गोठालाले मरेको जनावरको सिनुमा विष लगाएर ब्वाँसो मार्ने गरेको किस्सा पनि सुनाए । ब्वाँसोले मानिसलाई दुःख दिए पनि त्यो प्रकृतिको अनुपम सम्पदा हो । अझ नेपालको हिमालयन वल्फ विश्वकै निम्ति एक नयाँ ग्रे वल्फको उप–प्रजाति हुनसक्ने सम्भावना छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले राष्ट्रिय स्तरमै हिमालयन वल्फ जोगाउने एकीकृत कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ । यसप्रति यथोचित रूपमा संरक्षणमा ध्यान नपुर्‍याउने हो भने यसको हालत पनि निकट भविष्यमै बामपुड्के बँदेलको जस्तो हुनेछ ।
प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७६ ०९:२०
कोशी टप्पुमा रानीचरा
माघ १८, २०७६ कमल मादेन
वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर संजय था श्रेष्ठ कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष र यसको आसपासको क्षेत्रमा ५ वर्षदेखि तस्बिर खिच्दैछन् । उनको क्यामेरामा त्यहाँ पाइने सबैजसो दुर्लभ पन्क्षीको तस्बिर कैद भइसकेको छ । वन्यजन्तु पर्यटन व्यवसायीसमेत रहेका श्रेष्ठले २३ जनवरी २०२० मा एक अर्को दुर्लभ पन्क्षीको तस्बिर खिचे ।
तर उनले त्यो कुन प्रजातिको हो भनेर खुट्याउन सकेनन् । पहिचानका निम्ति चराविज्ञ तथा जुलोजिकल सोसाइटी अफ लन्डन नेपाल शाखा प्रमुख डा. हेमसागर बराललाई तस्बिर पठाए । डा. बरालले उक्त पन्छी ‘पेरिक्रोकोटस् क्यान्टोनेन्सिस’को भएको उल्लेख गरे । नेपालमा यसअघि यसको तस्बिर कसैले खिचेको थिएन । अहिलेसम्म यसको तस्बिर नेपालको चरा सम्बन्धी पुस्तक तथा जर्नलमा छापिएको पाइन्न ।
बेलायतका जीव वैज्ञानिक रोबर्ट स्विन्होले ‘पेरिक्रोकोटस् क्यान्टोनेन्सिस’लाई सर्वप्रथम विश्वसामु चिनाएका हुन् । स्विन्हो सन् १८५४ मा एक कर्मचारीका रूपमा चीन गएका र पन्क्षीहरूको अध्ययन गर्ने क्रममा ताइवान पनि पुगेका थिए । त्यहीँको एक क्यान्टोनमा पेरिक्रोकोटस् जाति अन्तर्गतको एक नयाँ प्रजाति फेला पारे । क्यान्टोन शब्दलाई ल्याटिनीकरण गरी उनले उक्त पन्क्षीको वैज्ञानिक नाम पेरिक्रोकोटस् क्यान्टोनेन्सिस नामकरण गरे । यो जानकारी सन् १८६१ मा लन्डनबाट प्रकाशित द आएबिस, अ म्यागेजिन अफ जेनेरल अर्निथोलोजी भोलम–३ मा समावेश छ । स्वन्होले लेखेका छन्, ‘ताइवानको क्यान्टोनमा उक्त पन्क्षी उल्लेख्य मात्रामा पाइन्छ ।’
ट्याक्सोनोमी अफ द बर्डस् अफ द वर्ल्ड (सन् २०१८) पुस्तक अनुसार संसारभर पेरिक्रोकोटस् जाति (जिनस) अन्तर्गत २६ प्रजाति सूचीकृत छन् । नेपालमा भने यो प्रजातिका पन्क्षीलाई ‘रानीचरा’ भनिन्छ । हामीकहाँ रानीचराको ८ प्रजाति पाइन्छ । तिनै ८ मध्ये १ थियो संजय था श्रेष्ठले खिचेको तस्बिर । यो प्रजातिका पन्क्षीलाई तिनका वैज्ञानिक नामका अतिरिक्त समग्र रूपमा मिनिभेट भनिन्छ । बेलायतका चरा विज्ञहरूले रोबर्ट स्विन्होबाट पत्ता लगाइएको पेरिक्रोकोटस् क्यान्टोनेन्सिस्लाई उनैको नामसँग जोडेर स्विन्होज मिनिभेट भन्ने गर्छन् ।
यो पन्क्षीको ढाड र विशेषतः छाती अनि पेटमा हल्का ब्राउन हुन्छ । यसैको आधारमा यसले एक अर्को उपनाम ब्राउन–रम्पड मिनिभेट पनि पाएको छ । चीन लगायत दक्षिणपूर्वको चरा सम्बन्धी लेखिएका पुस्तकमा उक्त पन्क्षीको नाम ब्राउन–रम्पड मिनिभेट लेख्ने गरिएको पाइन्छ । समग्र पन्क्षीको रूपरंगका आधारमा यसलाई स्विन्होज मिनिभेट भन्नुभन्दा ब्राउन–रम्पड मिनिभेट भन्नु पन्क्षी पहिचानका निम्ति सजिलो हुन्छ । यद्यपि पन्क्षी अध्येयता तथा बर्ड वाचरहरू यो पन्क्षीलाई झन्डै यस्तै आकृति र रूपरंग भएको एसी मिनिभेट भन्ठानी झुक्किन्छन् । एसी मिनिभेट पनि दक्षिण एसियाको एक दुर्लभ पन्क्षी प्रजाति हो ।
डुलुवा अर्थात् ‘भेग्रेन्ट’
अंग्रेजी शब्दकोश अनुसार घरमा नबसेको व्यक्ति वा भिक्षाको लागि ठाउँ–ठाउँ चहार्नेलाई ‘भेग्रेन्ट’ भनिन्छ । यो शब्द चरा अध्ययन, अनुसन्धानमा पनि प्रयोग हुन्छ । कुनै ठाउँमा कुनै पन्क्षी प्रजाति नियमित होइन, वर्ष बिराएर वा अहिलेसम्म केही पटकमात्र देखिए, त्यस्ता पन्क्षीलाई त्यस ठाउँका निम्ति डुलुवा अर्थात् ‘भेग्रेन्ट’ भनिन्छ । द स्टेटस् अफ नेपाल्स बर्डस् ः द नेसनल रेड लिस्ट सिरिज (सन् २०१६) भोलम–१ पुस्तकमा नेपालमा पाइएका कुल पन्क्षीमध्ये ७४ प्रजाति भेग्रेन्ट हुन् भनिएको छ । तिनीहरू अहिलेसम्म १० वा त्यसभन्दा कम पटकमात्र देखिएको उल्खे छ । त्यो सूचीमा स्विन्होज मिनिभेट पनि परेको छ । तर क–कसले कहाँ, कतिपटक देखेका थिए भन्ने जानकारी छैन ।
सन् २०११ मा प्रकाशित ‘भारतीय उपमहाद्वीपका चराहरू’ पुस्तकमा स्विन्होज मिनिभेटलाई भेग्रेन्ट मानिएको छ । सुमन्त राजगुरु र पञ्चमी मनु उकिल लिखित ‘साइटिङ अफ भेग्रेन्ट स्पेसिस् एट बर्बेरा, उडिसा’ लेखमा उक्त पन्क्षी उडिसामा पहिलोपटक सन् २०१६ मा देखिएको थियो । लेख इन्डियन बर्डस् जर्नलको भोलम–११ नम्बर ४ मे २०१६ संस्करणमा छापिएको हो । लेखमा जनाइए अनुसार त्यो पन्क्षीको तस्बिर २७ फेब्रुअरी २०१६ मा उडिसा राज्य अन्तर्गत खोर्धा जिल्लाको बर्बेरा–धुनाली रिजर्भ फरेष्टमा खिचिएको थियो । यसैगरी सन् २०१६ मै यो पन्क्षी कर्नाटकमा पनि देखिएको जानकारी ‘न्यु रेकर्ड अफ स्विन्होज मिनिभेट इन बेंगलुरु, कर्नाटक’ एक अर्को लेखमा छ । भानुश्रीधन र अरुहरू लिखित उक्त लेख इन्डियन बर्डस् जर्नलको भोलम–१२ नम्बर २ र ३ अक्टोबर २०१६ संस्करणमा छापिएको छ । यसैगरी त्यो पन्क्षी गुजरातमा पनि देखिएको जानकारी इन्डियन बर्डस् जर्नलकै भोलम–१४ नम्बर ५, नोभेम्बर २०१८ संस्करणमा छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघले सन् २०१६ मा प्रकाशन गरेको एक जानकारी अनुसार स्विन्होज मिनिभेट कम्बोडिया, चीन, हङकङ, लाओस पिपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, म्यान्मार, थाइल्यान्ड र भियतनाममा पाइन्छ । लेख अनुसार यो पन्क्षी ती देशहरूमा धेरै संख्यामा पाइएकाले यसलाई लिस्ट कन्सर्न समूहमा राखिएको छ । यसको अर्थ यो पन्क्षी प्रजातिलाई प्राथमिकतामा राखेर संरक्षण गर्न आवश्यक ठानिन्न । जोन म्याक्किनन र क्यारेन फिलिप्स लिखित ‘अ फिल्ड गाइड टु द बर्डस अफ चाइना (सन् २०००’ पुस्तकमा यो पन्क्षीले चीनको मध्य, दक्षिण र पूर्वमा बचेरा हुर्काउँछ र हिउँदमा दक्षिणपूर्व एसियातर्फ बसाइँ सर्छ भनिएको छ ।
प्रकाशपुर डुल्दै गर्दा जे देखियो
संजय था श्रेष्ठ, सुवास भुजेल, राम श्रेष्ठ र उज्ज्वल जिम्मा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रस्थित कोशी गाउँपालिका र बराह नगरपालिकाको सीमावर्ती भूभागमा जनवरी २३ तारिख चरा अवलोकननिम्ति मध्यदिनमा हिँड्दै थिए । त्यहाँ १ः३० बजे २०/२५ वटा टाढैबाट एसी मिनिभेटको बथान देखे । उनीहरू अलि नजिक गए । संजय था श्रेष्ठलाई केही पन्क्षी एसी मिनिभेटभन्दा अलि भिन्नजस्तो लाग्यो । उनले टेली लेन्सबाट तुरुन्तै केही तस्बिर खिचे । कतै बाज कराएको सुनियो, अनि ती बथान पन्छी एकाएक हराए । त्यसपछि कतै देखिएनन् । कराएको आवाज पनि सुनिएन । त्यो एसी मिनिभेटभन्दा अलि भिन्न पन्क्षी कुन होला भन्ने खुल्दुली उब्जियो, संजयको मनमा ।
त्यो पन्क्षीको चुच्चो पछाडि टाउकोमा सेतो सतह एसी मिनिभेटको भन्दा अलि बढी थियो । चुच्चोको माथिल्लो भागबाट आँखा हुँदै कन्चटतर्फ गएको कालो रंगको सोती आँखाको चौडाभन्दा थोरै कम थियो । यसको ढाड र छातीतर्फ हल्का ब्राउन रंग स्पष्ट देखियो । एसी मिनिभेटभन्दा थप फरकचाहिँ यसको खुट्टाको रंग अलि कालो थियो । यसको चुच्चो अर्थात ठुँडो पनि एसी मिनिभेटको भन्दा बढी कालो थियो । रोबर्ट स्विन्होले सन् १८६३ मा पेरिक्रोकोटस् क्यान्टोनेन्सिस्बारे लेख्दा उक्त चराको खुट्टा र ठुँडो कालो हुन्छ भन्ने विवरण खुलाएका थिए । यसलाई ब्राउन–रम्पड मिनिभेट भनिने भएकाले यो थोरै ब्राउन त हुने नै भयो । जबकि एसी मिनिभेट हल्का, सेतो खरानी रंगको हुन्छ । उपरोक्त लक्षणका आधारमा संजय था श्रेष्ठले जनवरी २३, २०२० मा खिचेको तस्बिर स्विन्होज मिनिभेट अर्थात पेरिक्रोकोटस् क्यान्टोनेन्सिस्कै हो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
सुनसरी प्रकाशपुरका अनिस तिम्सिना सन् २०११ ताका कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा एसी मिनिभेट पहिलोपटक देखिएको बताउँछन् । उसबेला पनि स्विन्होज मिनिभेट देखिएको उनको ठम्याइ छ । यसैको आधारमा बर्डस् अफ नेपाल (सन् २०१६) र द स्टेटस् अफ नेपाल्स बर्डस् ः द नेसनल रेड लिस्ट सेरिज (सन् २०१६) पुस्तकमा स्विन्होज मिनिभेट भेग्रेन्ट समूहमा राखिएको हुनुपर्छ । सुनसरी मधुवनका बद्री चौधरी एसी मिनिभेटको बथानमा स्विन्होज मिनिभेट देखेको जिकिर गर्छन् । पोखराका मनशान्त घिमिरे पनि कोशी टप्पुमा सन् २०१७ मा एसी मिनिभेट २०/२५ वटा देखेको बताउँछन् । यस्तै भनाइ झापाका देवेन खरेलको पनि छ ।
‘अ फिल्ड गाइड टु द बर्डस् अफ चाइना’मा लेखिए अनुसार चीनमा स्विन्होज मिनिभेट पतझड तथा सदावहार जंगलमा समुद्री सतहबाट १५ सय मिटर उचाइसम्म विचरण गर्छन् । हिउँदमा यो पन्क्षी दक्षिणपूर्व तथा दक्षिण एसियामा बसाइँ सर्छ । यसैक्रममा यो पन्क्षी कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष लगायतका ठाउँमा आइपुग्दो रहेछ । यो पन्क्षी सन् २०११ देखि मात्र नेपाल आउन थालेको भनै होइन । यसकारण यो पन्क्षीलाई भेग्रेन्टको सूचीमा सूचीकृत गर्न मनासिव हुन्न । यो पन्क्षी नेपालको निम्ति हिउँदमा आउने एक आगन्तुक प्रजाति नै हुनुपर्छ ।
वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर तथा वर्ड वाचर गाइडहरूले केही वर्षयता नेपालका नयाँ पन्क्षी प्रजातिका तथ्यांक विज्ञको सहकार्यमा अध्यावधिक गरिरहेका छन् । यसक्रममा संजय था श्रेष्ठले स्विन्होज मिनिभेटको तस्बिर खिचेर नेपालको पन्क्षी तथ्यांक दुरुस्त गर्ने काममा सघाउ पुर्‍याएका छन् ।
प्रकाशित : माघ १८, २०७६ ०९:०३